बहुदल पक्षधर हुँदा: हेमन्त कर्माचार्य – Radio Hatemalo FM
बहुदल पक्षधर हुँदा: हेमन्त कर्माचार्य
प्रकाशित मितिः १६ बैशाख २०७७, मंगलवार १९:०५ April 28, 2020 हातेमालो संवाददाता
वि.सं.२०३६ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट जनमत संग्रह घाेषणा भयाे । `सुधारिएकाे पञ्चायती व्यवस्था कि बहुदलीय व्यवस्था´ राेज्न अाव्हान गरिएकाे जनमत संग्रहमा तत्कालीन निर्दलीय व्यवस्थाका पक्षधरबाट इतर विचारकालाई गरिने व्यवहार, दमनका विरूद्ध हामी केही युवा नजानिँदाे ढंगले लागिसकेका थियाैं । साेही कारणले बहुदलका पक्षमा जनमत जुटाउन सक्रिय पनि भयाैँ ।
एक समूह ६ जनाजति बाँके, राप्ती किनार हुँदै कालीमाटी काल्चे (सायद सुर्खेत) सम्म प्रचारमा हिँड्याे ।
बहुदलकाे पक्षमा प्रचार गर्दै हेमन्त कर्माचार्य, फाेटाे र स्टाेरी फेसबुकवालवालबाट
म र प्रमाेद श्रेष्ठ दुई जना बाँके, बर्दिया राजापुर हुँदै कैलालीकाे मलवारा मुद्धी क्षेत्रसम्म प्रचार गर्दै पुग्याैँ । गेरू पानीमा सानाे काठकाे डण्डीमा कपडा बेह्रेर बनाइएको कूचीले भित्ते लेखन, स-साना छापिएका प्रचार सामग्रीलाई गाेबरले भित्ता वा ठूला रूखमा टाँस गर्दै हामी हिँडेका थियाैँ ।
त्यही बेला हाे । अर्धभूमिगत घाेषित कम्युनिष्ट नेता माेहन विक्रम सिंह (एमबी सिंह) पनि कैलाली पुग्नु भएकाे रहेछ । उहाँले बहुदलका पक्षमा हामीले टाँसेका प्रचार सामग्री च्यात्दै तथानाम गाली गर्दै रहेकाे पछि हामीले बुझ्दै जाँदा थाहा पायाैँ । सिंहकी पहिलाे धर्मपत्नी शान्ता सिंह पुछरीमा बस्नु हुन्थ्याे । उहाँ अाफ्नाे छुट्टै पहिचान दिएर शिक्षण कार्यमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो । पुछरीस्थित हिमालय मा.वि.(त्यसबेला सायद निमावि थियाे)मा शान्ताजीलाई शिक्षण कार्यमा संलग्न गराउनमा बुबा जनकबहादुर कर्माचार्य, ज्ञानबहादुर शाही लगायतकाे सहयाेेगी भूमिका रहेकाे थियाे । एमबी सिंहले बीपी काेइराला र कांग्रेस बहुदलका पक्षमा लागेका कारण पनि घाेर विराेध गर्दै हिँडेका थाहा भयाे । जनमत संग्रहका समयमा तत्कालीन पञ्च नेतासँग हिमचिम बढी कम्युनिष्टकै रहेकाे थियाे ।
२०१७ पछिका दिनमा तत्कालीन दरबारबाट हण्डी लिँदै पञ्चायती व्यवस्था इतरमा लागिरहेकालाई अ.त. घाेषित गराउँदै तिनीहरूका बारेमा शासक पक्षलाई सुराकी गर्ने काम गर्नेहरू कम्ति थिएनन् ।
त्यसमा तुलनात्मक कांग्रेस भन्दा वामपन्थीहरू नै धेरै रहेकाे इतिहास साक्षी छ । त्यस्ता जाली, धूर्त, पाखण्डीहरू राजाकालमा मात्र नभई बहुदल पुनर्स्थापनापछिका विभिन्न कालखण्डमा लाेप भएनन् । भाइरसझैँ सत्ताकाे निकट भएर केही कांग्रेस, केही कम्युनिष्ट, केही मधेश केन्द्रित दलभित्रसम्म लेस्सिँदै लाभ उठाउने र संक्रमण फैलाउँदै क्षति गर्न कुनै कमी राखेनन् । नेतृत्व पक्षबाट त्यस्ता भाइरसलाई समयमै उपचार गर्नुकाे साटाे चाकडीकाे अानन्दमा मस्त हुनुकाे परिणाम हाे-२०४६ पछिकाे तीन दशक निराशाजनक नै रहेकाे अनुभूति अामनागरिकलाई भएकाे छ ।
बैशाख १६, २०७७ ।
नेपाल र भारतको सिमा नाकामा ठुलो मात्रामा अबैध सामग्री बरामद
तमू (गुरुङ) सञ्चारकर्मी संघको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न
आन्तरिक विमतिमा अल्झिएर जनताको जीवन रक्षाको दायित्वबाट विमुख बन्न मिल्दैनः प्रधानमन्त्री ओली
बाँकेमा काेराेना विरूद्धकाे स्वास्थ्य सामग्री अभाव रहेको निश्कर्ष
मुख्यमन्त्री पोखरेलले चिनियाँ अन्तराष्ट्रिय विभाग प्रमुख सङ् ताओ सहित चिकित्सकसँग संवाद